I-ProOpinion: Joyina uLuntu loShishino oluqhutywa nguPhando | Martech Zone
I-ProOpinion: Joyina uLuntu loShishino oluqhutywa nguPhando
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 25, 2015 NgeCawa, ngo-Epreli 26, 2015 Douglas Karr
Olunye lotshintsho esilubonayo kwiwebhu kukuba isiza simahla kunye neengcebiso ze-freemium ziyaqhubeka nokulwa nomgangatho womxholo wazo kunye nokuchaneka kolwazi oluvelisayo. Xa kufikwa kwizigqibo zentengiso, siyaqhubeka ukubona ukuba indlela elungiselelwe yona ivelisa ezona ziphumo zihle. Kubalulekile ukuba abacebisi okanye abathengisi bafunde inkcubeko, izixhobo, kunye neenjongo zeshishini ngaphambi kokwenza isindululo sesicwangciso okanye iqonga. Ubungakanani obunye abuhambelani konke.
IproOpinion ibonelela ngomxholo owahlukileyo, onikwe amandla kuphando, ongafumanekiyo kwenye indawo kuba iProOpinion ingumthombo wophando. Umxholo uninzi, ufikeleleka ngokulula, kwaye okona kubaluleke kakhulu, unentsingiselo.
Amalungu eProOpinion azinikele kwinkqubela phambili, azinikele ngokupheleleyo ekuvuseleleni izinto ezintsha, kwaye azingisa ekusukeleni kwabo ilizwe elingcono. Kwiinkampani kwihlabathi liphela, ingxelo ngqo evela kubantu abasebenzisa iimveliso kunye neenkonzo zabo ibalulekile xa bezama ukugcina abo bakhuphisana nabo kwisipili sabo sokujonga ngasemva. IproOpinion ivumela amalungu ukuba aphembelele iimveliso kunye neenkonzo ezizayo ngokwabelana ngezimvo kuphando lwe-Intanethi.
IproOpinion isimahla ukujoyina kodwa amalungu anokufumana into encinci ngelixa ephucula nendawo yentengiso. Eminye imivuzo ethandwayo efunyenweyo ibandakanya iiAmazon.com Amakhadi eSipho kunye neTunes Gift Cards. Unokunikela kwakhona ngengeniso yakho kwi-American Red Cross. Izimemo zovavanyo zithunyelwa nge-imeyile kumalungu okanye banokungena kwiakhawunti yabo kwi-proopinion.com ukuze bathathe inxaxheba kuphando lwe-Intanethi.
Uphendlo lwakho lophando olubalulekileyo kuwe lume apha - joyina ProOpinion namhlanje.
Le yincoko exhaswayo ebhalwe ndim egameni leProOpinion.
tags: uluntu lweshishiniuphando lweshishiniumbonouluntu lophando
Zeziphi iimetriki zokulinganisa ukuThengiswa kokuSebenza ngokukuko
Uluhlu lwezixhobo zeNtengiso zeDijithali ezingama-29